Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Inkampani Entsha Yezidakamizwa Ifuna Izintengo Eziphansi Kakhulu Ezibhalweni Ezisindisa Ukuphila Eziyi-100
I-Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) namuhla yethule ngokusemthethweni ikhemisi layo eliku-inthanethi i-costplusdrugs.com. Ukwethulwa kuza emavikini ambalwa ngemva kokusungulwa komphathi wabo wokuhlomula ekhemisi (PBM) - yomibili imizamo ebalulekile emizamweni yenkampani yokusiza ukuvikela abathengi emananini entengo ezidakamizwa.
Ngokwenhlolovo ye-Gallup kaSepthemba 2021, abantu baseMelika abayizigidi eziyi-18 abakwazanga ukukhokhela okungenani umuthi owodwa kadokotela wemizi yabo ngenxa yezindleko ezihlala zikhuphuka, kanti umuntu waseMelika oyedwa kwabayi-1 weqe imithamo ukuze onge imali. Ukwethulwa kwekhemisi kumelela igxathu lokuqala elibalulekile ekuletheni imithi ethengekayo ezigidini.
Imithi ephawulekayo ebonisa ukonga okuphawulekayo kwekhemisi ihlanganisa:
• I-Imatinib – ukwelashwa kwe-leukemia
o Intengo yokudayisa: $9,657 ngenyanga
o Intengo ephansi ngevawusha evamile: $120 ngenyanga
o Intengo ye-MCCPDC: $47 ngenyanga
• I-Mesalamine - ukwelashwa kwe-ulcerative colitis
o Intengo yokudayisa: $940 ngenyanga
o Intengo ephansi ngevawusha evamile: $102 ngenyanga
o Intengo ye-MCCPDC: $32.40 ngenyanga
• I-Colchicine – ukwelashwa kwegout
o Intengo yokudayisa: $182 ngenyanga
o Intengo ephansi ngevawusha evamile: $32 ngenyanga
o Intengo ye-MCCPDC: $8.70 ngenyanga
"Sizokwenza noma yini edingekayo ukuze sitholele iziguli imithi ethengekayo," kusho u-Alex Oshmyansky, oyi-CEO yakwaMark Cuban Cost Plus Drug. “Umthamo wezidakamizwa ezingase zisindise abantu abantu abathembele kuzo yinkinga engeke ishaywe indiva. Kubalulekile ukuthi sithathe isinyathelo futhi sisize ukwandisa ukufinyelela kule mithi kulabo abayidinga kakhulu.”
Njengomdayisi wemithi obhalisiwe, i-MCCPDC ingadlula abantu abaphakathi nendawo namamaki asabekayo. Izintengo zekhemisi zibonisa izintengo zangempela zomkhiqizi kanye nenani eliphansi elingu-15% nemali kasokhemisi. Ngosizo lwenkampani yezempilo yedijithali i-Truepill, iziguli zingalindela ulwazi lwe-e-commerce olungenamthungo, oluvikelekile njengoba zizulazula kuwebhusayithi yekhemisi, eyakhiwe futhi yanikezwa amandla inkundla yezempilo yedijithali ye-Truepill. Iziguli zizophinde zijabulele ukugcwaliseka okuthembekile kwencwadi kadokotela kanye nokulethwa kusetshenziswa indawo yekhemisi ye-Truepill kazwelonke.
Ngenxa yokuthi inkampani yenqaba ukukhokha izintengo ezisabalele kuma-PBM ezinkampani zangaphandle ukuze ivunyelwe ukucubungula izimangalo zomshwalense, ikhemisi eliku-inthanethi lizoba ibhizinisi lokukhokhela imali. Kodwa-ke, imodeli yayo isho ukuthi iziguli zingathenga ngokushesha imithi eminingi ngamanani ngokuvamile angaphansi kwalokho okudingwa ukudonswa kwemali okuningi kwezinhlelo zomshwalense kanye ne-copay.
NgoNovemba 2021 i-MCCPDC yangena embonini ye-PBM ukuze inikeze izinkampani ezihlinzeka ngemithi kadokotela ezinhlelweni zazo zenzuzo yabasebenzi. I-MCCPDC ithembise “ukuba sobala ngokugqamile” ezingxoxweni zayo nezinkampani zezidakamizwa njenge-PBM, iveze izindleko zangempela ezikhokhela izidakamizwa kanye nokuqeda ukusabalala kwamanani entengo kanye nezibonelelo zesaphulelo ezingalungile. I-MCCPDC ilindele ukuthi i-PBM yayo ingase yonge izinkampani izigidi zamadola ngaphandle koshintsho ezinzuzweni zayo, kuye ngosayizi womqashi, ngoba izoqeda imodeli ye-PBM evamile. Inkampani ihlela ukuhlanganisa ikhemisi kanye nesitolo esidayisa yonke impahla ne-PBM yayo, ngakho noma iyiphi inkampani esebenzisa i-PBM yayo izofinyelela amanani entengo ngesitolo sayo se-inthanethi.
"Kunabadlali abaningi abangalungile ochungechungeni lokuhlinzekwa kwemithi abavimbela iziguli ekutholeni imithi ethengekayo," kusho u-Oshmyansky. "Ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi izintengo ezithengekayo ziyadlula ukuhlanganisa ziqonde."
Umnotho, Ibhizinisi, noma Ikilasi lethu elisha Lezempilo?